Ukubanjiswa kwe-Ultrasonic kwe-E-Liquid - Hielscher Ultrasound Technology
Ultrasonic Steeping ye-E-Liquids
I-ultrasonic steeping ithuthukisa ukunambitheka kwama-e-ephuzi / ama-e-juice kakhulu.
Imithi yokwelapha i-ultrasonic inikeza izinzuzo ezimbili ezinkulu:
Okokuqala, i-ultrasonic steeping inikeza iphrofayli ekhethekileyo yokunambitheka, ekhonjiswe ukunambitheka okugcwele, okuzungezile nokubushelelezi.
Okwesibili, nge-high-power ultrasonicator yezimboni, ukuqhutshwa komsebenzi kuqedwa phakathi nemizuzu embalwa – ukuthatha ukukhiqizwa kwe-e-liquid industrial kuya ezingeni elisha.
Kungani i-Ultrasonic Steeping?
Ngokuphambene nokwehla kwendabuko, lapho uketshezi oludinga khona kusukela emasontweni amathathu kuya ezinyangeni eziningana ukuthumba, ukuhamba kwe-Ultrasonic-assisted speeding inqubo kakhulu: I-Ultrasonic cavitation inikeza ukudluliselwa okukhulu kwesisindo kanye nesitokisi ukuze isikhathi sokuphuza sinciphise sibe imizuzwana embalwa.
I-ultrasonic steeping yenza ngcono ukunambitheka nokuguga kwe-e-juice futhi kubangele iphrofayli enamandla, kodwa eyindilinga futhi epholile.
Ngokumakethe okusheshayo okwandisa ama-e-liquids, indlela ye-ultrasonic steeping yenza abakhiqizi bejusi bakwazi ukwanelisa izidingo ezikhulayo ze-e-juice ephezulu.
Phakathi ne-ultrasonic steeping, ukuxuba kwe-VG / PG kufakwe izithako ze-flavour. Ukusebenzisa ama-ultrasonicators aphezulu, ukuqhubekela phambili kuthuthukisiwe kakhulu okuholela ekunambithekeni okuphakeme nangenqubo ephumelelayo kakhulu.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Steeping:
ayikho i-chemical flavor off-flavour
izinga eliphakeme lokukhipha / ukukhuphuka
Izinsiza ze-ultrasonic zokukhiqiza izakhi ze-E-Liquids
I-Hielscher Ultrasonics inikeza amadivayisi athembekile aphezulu-amandla ama-ultrasonic wokukhiqiza okunamandla kwe-e-liquids. Kungakhathaliseki ukuthi unesithakazelo ekukhiqizeni amanani amancane noma ukusetshenziselwa kwemikhiqizo emikhulu emakethe enkulu, i-Hielscher inehlelo olufanelekayo lwe-ultrasonic yezidingo zakho.
Ukuze kuvezwe inkatho encane, amaprosesa ethu e-ultrasonic UP400St noma UIP500hdT zifanelekile kakhulu ukucubungula i-e-liquids ku-batch noma imodi eqhubekayo. Ukukhiqizwa kwemikhiqizo emikhulu, sincoma ama-ultrasonicators ethu ezimboni, isb I-UIP2000hdT.
Yiziphi izinzuzo ze-ultrasonicators ze-probe-type ultrasonicators ezinamandla ze-Hielscher uma ziqhathaniswa nokugeza kwe-ultrasonic?
Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, amabhuku ase-ultrasonic aklanyelwe ngenhloso yokuhlanza izinto (isib. Ubucwebe). Zikhiqiza i-amplitude ephansi kakhulu futhi umphumela we-acoustic cavitation kwenzeka ngokungalingani kakhulu emanzini aphethwe yi-sonicated. Njengoba uketshezi ku-baths ultrasonic ayitholi ukwelashwa okufanelwe, okukhiphayo akusikho ikhwalithi – okwenza kube nekhwalithi elingalindelekile, elingalingani lomkhiqizo wokugcina (njengokunambitheka okukhulu, ukunambitheka kwe-flavour phakathi kwama-batches).
Kungani i-Hielscher Ultrasonics?
Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic asebenza ezimbonini ahlinzeka nge-high-power ultrasound futhi akwazi ukugijima kuma-amplitudes aphakeme kakhulu. Lokhu kusho ukuthi ama-ultrasonicators ethu asezimboni angasetshenziswa kalula kuma amplitudes angafika ku-200μm ku-24/7 ukusebenza. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ku-Hielscher kuqinisekisa ukusebenza okungenasiphelo 24/7 ngaphansi komsebenzi okhuthele futhi ezindaweni ezifuna izinto.
Isikhuhlu Sogwayi Sombumbulu
Isikhali Sokukhishwa Kwe-Cannabis – Inzuzo ye-Sonication
I-steeping iyigcoba emanzini aqinile ukuze kukhishwe ama-flavour noma ukuyidambisa, isib. Ikhofi noma itiye. Ngama-e-liquids / ama-e-juices, ukugxila kusho ukuguga ukufezekisa iphrofayli yokunambitheka ethuthukisiwe. Ngokufana neziphuzo ezidakayo ezifana newayini noma i-whisky, i-e-liquid iqala iphrofayli ekhethiwe, ejikelezayo nebushelelezi. Ukwenyuka ngokwezenzo kudinga isikhathi eside os. Ukwelashwa kwe-ultrasonic kuphuthumisa ukusabela kwamakhemikhali ngesikhathi sokuqhuma ukuze imiphumela efunayo ifinyelelwe esikhathini esincane.
I-E-liquids nayo ibizwa nangokuthi i-vape juice noma i-juice futhi iyinhlanganisela esetshenziswa kuma-vaporizers kanye no-e-cigarettes. Isithako esiyinhloko se-e-liquids / e-juice yilokho okubizwa okuthiwa i-PG ne-VG evulekayo, okuyinto isifinyezo se-Propylene Glycol kanye ne-Vegetable Glycerin ngokulandelana. Umsebenzi we-PG no-VG njengama-producer-productive agents. Bobabili, i-PG ne-VG ingaxubana ngezilinganiso ezihlukene ukuze zithole isisetshenziswa semithombo ye-e-liquids, esinikeza izici ezithile.
I-PG ayinambitheka, ine-viscosity ephansi futhi ibukeka ukubukeka okucacile okwenza ukunambitheka okuneziwe ku-e-liquid kubonakala nakakhulu.
I-VG inikeza inothi elimnandi lokunambitheka futhi ikhiqiza ukuqhuma okuningi.
Ama-ratios avamile aphakathi kuka 70/30 kuya ku-50/50 VG / PG. Kuye ngokunambitheka komthengi, isilinganiso se-VG / PG singashintshwa. Ukuze uthole ukuzwa okunebushelelezi ngokukhiqiza kwe-vapor, i-VG ratio ephakanyisiwe Kunconywa.Ukuze kube nesipiliyoni esinamandla emphuneni nge-flavour enkulu, (efana nentuthu kagwayi) i-PG ratio ephakeme kakhulu.
I-E-liquids ingaqukatha i-nicotine, nokho kunezinhlobonhlobo ze-nicotine-free e-juice etholakalayo, enezithako kuphela.
Ama-flavour athandwa kakhulu e-e-liquids ayigwayi, i-menthol, i-mint, i-chocolate, i-caramel, isinamoni, ukhukhunathi, i-vanilla, amakhambi, nezithelo zensimu ezifana nesitrobheli, i-apula, i-kiwi, imango njll.
I-Ultrasonic Processor UP400St ukuqhuma ama-juice
Imiphumela ye-Ultrasonic Steeping: